Turkiga: Haweeney isku qarxisay saldhig boolis oo ku yaalla Istanbul – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Turkiga: Haweeney isku qarxisay saldhig boolis oo ku yaalla Istanbul
Mareeg.com: Haweeney ayaa isku qarxisay saldhig boolis oo ku yaalla degaank Sultan Ahmet ee bartamaha magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Haweeneyda qaraxa fulisay ayaa la sheegay iney ku hadleysay afka Ingiriiska ayaa xirneyd indha sharer, waxeyna markii ay is qarxineysay booliska u sheegtay iney gudaha saldhiga boorso kaga tagtay.
Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 2 boolis ah oo mid ka mid ah markii dambe uu geeriyooday.
Ilaa iyo hadda lama sheegin heybteeda, balse waxaa la tuhmayaa in ay ka tirsaneyd urur xagjir ah oo Turkiga ka jira, kaasoo loo yaqaano Revolutionary People’s Liberation Party.
Xubin ka tirsan ururkaasi ayaa todobaadkii lasoo dhaafay weerar ku qaaday xafiiska ra’iisul wasaaraha Turkiga.
Dagaalka Galgala oo galay maalintii 3-aad iyo Gaas oo guulo sheegtay